Zinedine Zidane Ayaa Diiday Inuu Damaanad Qaado Inuu Noqon Doono Tababaraha Real Madrid Xilli Ciyaareedka Soo Socda
HomeWararka Ciyaaraha MaantaZinedine Zidane ayaa diiday inuu damaanad qaado inuu noqon doono tababaraha Real Madrid xilli ciyaareedka soo socda
February 9, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Spain 0
Tababaraha Real Madrid Zinedine Zidane ayaa diiday in uu hubo in uu sii joogi doono Garoonka Bernabeu xagaaga danbe.
Ciyaaryahankii hore ee Galactico ayaa ku jira xaalad adag oo kooxda ah waxana shaki la galiyay mustaqbalkiisa kooxda.
Zidane ayaa dhowaanahan saxaafada hadal kulul la yeeshay oo ku saabsan ka bixitaanka Bernabeu, tababaraha reer France ayaana tan iyo markaas wax dammaanad qaad ah u siinin inuu la wareegi doono maamulka xilli ciyaareedka 2020-21.
Markii suxufiyiinta wax ka weydiiyeen mustaqbalkiisa, Zidane wuxuu yiri: “Waan arki doonaa taas, waxa ugu muhiimsan waa sida aan u shaqeyno hada, taasi waa waxa aan ka walwalsanahay.
“Kama badali karno waxa dhacay laakiin waxa kaliya ee aan dhihi karo waa kuwa wali kooxda jooga inay uqalmaan inay awoodaan inay si nabad ah uga shaqeeyaan. Dadku waxay dhihi karaan wax walba oo ay naga doonayaan, laakiin waxaan sii wadi doonnaa inaan nafsadeena aaminno.
“Dhamaanteen waxaan ku wada jirnaa hal doon waxaana dareemayaa in la i taageeray. Marka waqtiyada adag yihiin waa inaad isku daydaa oo aad wax walba rogtaa. Waan ogahay inaan haysto koox fantastik ah waxna nagama hor istaagi doonaan inaan sii wadno shaqada adag.”
Qandaraaska Zidane ee kooxda heysata horyaalka Spain ayaa dhacaya 18 bilood ka dib, kooxdiisa ayaana haatan 7 dhibcood ka liidata hogaamiyaasha La Liga ee Atletico Madrid iyagoo ciyaaray labo kulan in ka badan.